Combats libres : handray fifaninanana iraisam-pirenena i Madagasikara | NewsMada
Combats libres : handray fifaninanana iraisam-pirenena i Madagasikara
Eny fa na tsy mbola tafatsangana ara-dalàna aza ny federasiona eo amin’ny Perfect fighting commission sy ireo taranja miaraka aminy eo amin’ny « combats libres » (kempo, pancrace ary ny MMA) na PFC Kempo/DA, efa maromaro ireo hetsika nokarakarain’ireo mpitantana eto Madagasikara nanomboka tamin’iny taona lasa iny.
Ho an’ity taom-pilalaovana 2016 ity, hampiantrano fifaninanana iraisam-pirenena i Madagasikara. “Gala internatsional” kosa no hitondran’ny PFC Kempo/DA tarihin’ny filohany, Rakotonindriana Parfait, izany. Raha ny vaovao voaangona, eo amin’ny taranja pancrace izy io ka hifanandrinan’i Madagasikara sy La Réunion.
Araka izany, ho fanomanana io fihaonana io, hiroso amin’ny fifaninanana tsapa hitiliana ireo mpikatroka handrafitra ny ekipa nasionaly ny fikambanana eto Madagasikara, ny 30 janoary izao. Izany hoe, io hetsika nasionaly io no hamaritra ny ekipam-pirenena izay hampivondronana manomboka ny 27 febroary izao.
Aorian’izay kosa, hisy ny fifaninanana miverina amin’io “Gala international” io ka anjaran-dry zareo Reonioney indray no mampiantrano izany, ny volana jona.